Cuntooyinka tamarta laga helo - Caafimaad tips
Home / Cuntada / Cuntooyinka tamarta laga helo
Cuntooyinka tamarta laga helo
Daily Active March 23, 2020 Cuntada
Cuntooyinka tamarta laga helo | Hadii aad dareento in tamartaada ama awoodaada ay hoosayso waa muhiim inaad cuntooyinkan qaadato sidaa darteed markaad u baahato energy badan waxaad aadaa maqaayada ama kafateriyada si aad u dalbado keeg ama waxyaabaha macaan ee halkaas yaala ama cabitaanka kordhinaaya tamartaada.
Cuntooyinka fudfudud ee aad cuntay ma rabtaa inaad wax ka ogaato, kuwaasi waa uun cuntooyin kumeel gaadh ah kamana helaysid faaidooyin nafaqeed si aad u kordhiso tamarta jidhkaaga sidaa darteed waxaaba jira daraasado tilmaamaya in cuntooyinka kansarka laga qaado ay yihiin cuntooyinka fudud ee loogu talo galay in baahida dagdaga lagu daboolo.
Si aad uga maaranto cuntooyinka caafimaadka waxyeeleeya halkan waxaan kuugu soo gudbinaayaa cuntooyinka caafimaadka leh kuwaas oo hadii aad cunto kor u qaadaaya tamartaada islamarkaana waxay kaa dhigaayaan qof xoogan.
Yogurt : Sonkortu maaha mid xun markasta laakiin waa wax loo baahan yahay hadii aad tamarta jidhkaaga kor u qaadayso taasi waa sababta yogurt ay muhiim u tahay , sidaa darteed ku dadaal hadii aad cilad ku leedahayna kala tasho dhakhtarkaaga.
Akhriso cuntooyinka galmada u fiican
Akhriso cuntooyinka indhaha u fiican
Beans : Hadii aanad waligaa cunin noocyada kala duwan ee beanska ogow waxaad iska dayacday booratiin iyo waayo beanska waa cunto lagu dhargo sidaa darteed gaajo ha isku dilin, sidaas darteed beanska wuxuu sare u qaadaa tamarta qofka.
Lawska : Wuxuu lawsku u kala baxaa noocyo kala duwan sida midka soomaalidu cunto ee laga helo dalka noocyada lawska ee kala waxaa ka mida , Almond, walnuts, cashews , hadaba magac kasta oo aad ugu yeedho lawsku wuxuu leeyahay awood sare u qaadaysa tamartaada jidhka. Akhriso faaiidooyinka lawska
Lawsku kama koobna oo kaliya protein , omega 3, fatty acid, B vitamins laakiin sidoo kale lawska waxaa laga helaa magnesium.
Muuska / Mooska : Hadii aad rabto wax si dagdaga u kobciya tamarta jidhkaaga heli maysid wax ka wanaagsan muuska maxaa yeeelay wuxuu ku jiraa cuntooyinka tamarta leh sidaa daraadeed xataa uma hadii aanad haysan biyo aad ku dhaqdo meesha aad taagan tahay ayaad ku cuni kartaa waayo Allah weyne sw ayaa muuska diirkiisa ku daboolay oo ka ilaalay wasakhda.
Qamadiga : Hadii aad rabto inaad maalintaada ku bilowdo cunto wanaagsan oo ku siisa tamar kugu filan ilaa laga gaaraayo xiliga qadada waa inaad naftaada bartaa oo cuntaa qamadiga.
Liin dhanaanta iyo biyaha kulul : sida mararka qaar dhacda hadii aad aragto awoodaada oo daciifta ama tamarta jidhkaaga oo hoosaysa isla markaana aysan arintaasi ka iman gaajo hoos u dhigaysa awooda jidhka waxaa laga yaabaa inaad ooman tahay sidaa darteed waa inaad cabtaa biyo lagu daray liin dhanaan taasi waxay kaa caawinaysaa in tamarta jidhkaagu si dagdaga u soo laabato.